पुनर्बीमा दलाल निर्देशिका जारी, के-के छन् मापदण्ड ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > पुनर्बीमा दलाल निर्देशिका जारी, के-के छन् मापदण्ड ?
काठमाडौं । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलाल ‘ब्रोकर’ सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ ।
समितिले जारी गरेको निर्देशिकामा संगठित संस्थाको अधिकृत पूँजी कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । १० करोडम ५० प्रतिशत चुक्ता पूँजीको रुपमा कायम गर्नु पर्ने छ । अधिकृत पुँजीको ५० प्रतिशत रकम समितिबाट एअर मार्क गराई वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा राखेको हुनुपर्ने छ ।
ब्रोकरले तोकेको पूँजी मध्ये अधिकृत पूँजीको २५ प्रतिशत रकम समितिबाट एअर मार्क गराई बाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा राख्नुपर्नेछ । अधिकृत पूँजी तथा चुक्ता पूँजी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समितिले समय समयमा तोक्न सक्ने छ ।
संगठित संस्थाले पुनर्बीमा दलालको इजाजत लिन बीमा समितिमा निवेदन दिनु पर्नेछ । समितिले भने अुनसार निवेदन दिएपछि समितिले आवश्यक ठानेमा अनुमित दिने छ । समितिले अनुमति नदिइ ब्रोकरको काम गर्न पाइने छैन ।
उक्त निर्देशिकामा कुनै बीमा वा पुनर्बीमकको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी वा पदाधिकारी, परामर्शदाता, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक बीमक वा पुनर्बीमक सँग व्यवसायिक कारोबार भएको व्यक्ति तथा ऐन बमोजिम बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर, तस्रो पक्ष सहजकर्ता वा अन्य कुनै बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्र लिएको व्यक्ति त्यस्तो इजाजतपत्र बहाल रहेको अवधिभर ब्रोकर सञ्चालन गर्न पाउने छैन । यसका विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार पनि निर्धारण गरिएको छ ।
२०७८ जेष्ठ २७ गते ०८:३८ मा प्रकाशित
संस्थागत अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिन सकिने, के-के चाहिन्छ याेग्यता ?
अबदेखि साझा बसको ढोकाले नै भाडा उठाउने !
२३ गते रामनवमीमा चन्द्रागिरिमा निःशुल्क कन्सर्ट हुँदै, जाने हैन त ?
साधारण लगानीकर्ताहरु,डाटा एनालिटिक्सको नयाँ फिचरबारे जानकारी राख्नुहोस् !(भिडियोसहित)